Gaadiidka - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Faa'iidooyinka Qorshaha Medicare > Gaadiidka
Baahida gaadiidka? Waan ku caawin karnaa.
Waan fahannay taas gaadiidku waa lama huraan. Socdaalku waa lagama maarmaan si aad u hesho qaar ka mid ah ilaha aad u baahan tahay si aad u hesho oo aad caafimaad u hesho. Waan ku caawin karnaa.
Faa'iidooyinka iyo Taageerada Gaadiidka
Wuxuu raacaa Xubnaha MA Dual Plan (HMO SNP)
Our MA Laba Qorshe (HMO SNP) waxay bixisaa waxtarka gaadiidka ilaa 75 raacid hal mar ah sannadkii kalandarka.
Ma u baahan tahay inaad tagto ballanta dhakhtarka ama aad aragto farmashiistahaaga? U adeegso raacitaanadan si aad ugu tagto ugana soo baxdo xafiisyada bixiyayaasha, xarumaha caafimaadka, iyo farmasiiyada.
Jadwalka safarkaaga xiga adiga oo naga soo waca 1-800-942-0247 (TTY: 711), 8:00 subaxnimo ilaa 8:00 fiidnimo, toddoba maalmood toddobaadkii. Waxaan dejin karnaa kuraasta curyaamiinta iyo baahiyaha kale ee helitaanka.
Baahiyaha Maalinlaha ee Dhammaan Xubnaha
Waayo, gaadiidka hawlaha nolol maalmeedkaaga, sida helitaanka raashinka, waxaan kugu xiriirin karnaa ururrada maxalliga ah ee ka caawiya dadka waayeelka ah baahiyahan. Foojarada gaadiidka ee gaadiidka dadweynaha ama gaaska ayaa la heli karaa.
Si aad u codsato kaalmo, la xiriir Maareeyaha kiiska, ama ka wac Adeegga Macmiilka 1-800-942-0247 (TTY: 711), 8:00 subaxnimo ilaa 8:00 fiidnimo, toddoba maalmood toddobaadkii.
Adeegyada Degdegga ah iyo Ambalaaska marka la gaaro 2022 Qorshaha Faa'idada Medicare (MA)
Haddii aad qabto xaalad degdeg ah, wac 911.
Xusuusnow: Kharashaadka hoose waxaa loogu talagalay ambalaaska iyo/ama adeegyada gurmadka. Fadlan kor ka eeg faa'iidooyinka kale ee gaadiidka, sida raacitaanka ballamaha caafimaadka ama kaalmada lagu aado dukaanka raashinka.
Adeegyada ambalaaska ee xaaladaha deg-degga ah, kuwa aan degdegga ahayn, iyo ambalaaska AIR ayaa la daboolaa safar kasta oo Medicare daboolay.
MA Laba Qorshe (HMO SNP) $ 0 ama 20%
Qorshaha MA 1 (HMO) $ 325 doollar
Qorshaha MA 3 (HMO) $ 300 doollar
2021 MA Qorshayaasha
Adeegyada Gurmadka iyo Ambalaaska ee 2021 Qorshe
Qorshaha MA 1 (HMO) 20% caymis
Qorshaha MA 2 (HMO SNP) $ 325 doollar
MA Laba Qorshe (HMO SNP) Qiimaha 0%